डिस्ने प्लस (२०२०) को लागी उत्तम VPN - कहिँ पनि सजीलै हेर्नुहोस् - मनोरञ्जन
के तपाईं डिस्ने प्लस VPN खोज्दै हुनुहुन्छ? अनलाइन उपलब्ध अनगिन्ती विकल्पहरू छन्। तपाईले केहि नि: शुल्क पाउनुहुनेछ, अरू जुन प्रीमियम हुन्। निस्सन्देह, यो नि: शुल्क VPN सेवा प्रयोग गर्न कहिले राम्रो विचार हुँदैन, तर के यसको लागि यसको मूल्य छ भने? अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, यदि तपाईंले डिस्ने प्लसका लागि प्रीमियम VPN लिने निर्णय गर्नुभयो तर कुन कुन छनौट गर्ने थाहा छैन भने के हुन्छ?
चिन्ता नलिनुहोस्! यस सूचीमा डिज्नी प्लसका लागि शीर्ष VPN हरू छन् जुन तपाईंलाई मनोरन्जनको अनन्त प्रवाहमा ल्याउँदछ। त्यसो भए, सुरु गरौं!
तपाईं डिज्नी प्लस को लागी VPN किन चाहानुहुन्छ?
सबैभन्दा प्रत्याशित डिस्ने + अनुप्रयोग यहाँ छ, र यसले ठूलो लोकप्रियता पाइरहेको छ। तपाईंले डिज्नीबाट आफ्नो मनपर्ने सामग्री हेर्न मानक डिस्ने च्यानलको लागि पर्खनु पर्दैन। डिज्नी प्लस को सहयोगमा, तपाईं सक्नुहुन्छ डिज्नी सबै हेर्नुहोस् अनुप्रयोगमा स्वामित्व राख्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यससँग धेरै जसो यन्त्रहरूसँग प्रयोग गर्नको लागि विश्वव्यापी अनुकूलता छ!
यद्यपि तपाईको क्षेत्रमा डिस्नेको पहुँच नहुन सक्छ। डिज्नी लगातार विश्वभरि विस्तार भइरहेको छ, केहि देशहरूले यसलाई अनुमति दिदैन। अन्य स्थानहरूमा, डिज्नीले अनुमति प्राप्त गर्न केहि चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, केहि क्षेत्रहरूमा सामग्री सामग्री प्रतिबन्धित छ।
यसैले तपाईंलाई कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना आफ्नो मनपर्ने डिज्नी प्लस सामग्री स्ट्रिम गर्न एक सक्षम VPN सेवा प्रदायकको आवश्यकता छ।
तपाईं डिस्ने प्लस पहुँच गर्न सक्नुहुन्न?
तपाईं डिस्ने प्लस सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले सदस्यता पाउनुभयो भने। जहाँसम्म, यदि तपाईं डिजाईन प्ले स्टोरमा डिज्नी + फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, यो तपाईंको देशमा उपलब्ध नहुन सक्छ, त्यो डिजनीले प्रयोग गर्ने भू-अवरोधका कारणले हो।
यदि यो तपाईंको देशमा उपलब्ध छ, तर त्यहाँ अनुप्रयोगबाट केही सामग्री हराएको छ भने, यो सम्भवतः भू-प्रतिबन्ध हो। यहाँ प्रत्येक को अर्थ के छिटो सिंहावलोकन छ:
AVG VPN समीक्षा (२०२०) - तपाईंलाई वास्तवमै यो आवश्यक छ?
भू-अवरुद्ध तब हुन्छ जब सामग्री, अनुप्रयोग, प्लेटफर्म, वा सर्भर, इन्टरनेटसँग सम्बन्धित मूल रूपमा केहि पनि तपाईंको ब्लक गरिएको छ। यो कि त तपाइँको सरकार द्वारा गर्न सकिन्छ, लोकप्रिय चीन मा वा प्रदायकहरु को रूप मा देखीएको छ।
यदि प्रदायकहरूले यो गरे भने, त्यसो हुन सक्ने कारण तिनीहरू पनी अनुप्रयोग उपलब्ध हुन कोशिस गर्दै थिए। यद्यपि उनीहरूसँग सबै अनुमतिहरू छैनन्।
एक भू-प्रतिबन्ध भू-अवरोधको एक सानो संस्करण हो। यसमा, तपाईंसँग तपाईंको डिज्नी प्लस अनुप्रयोगमा सामग्री छैन जुन अन्य देशहरूमा उपलब्ध छ। यो केहि नियमहरूको कारणले हुन सक्छ। केहि सामग्री नेटवर्क वा देशको सेन्सर बोर्डसँग मेल खाँदैन। अरूहरू सिधा अप अपमानजनक वा अप्रिय हुन सक्छन्।
यी परिदृश्यहरूमा, सामग्री प्रतिबन्धित छ। उमेर प्रतिबन्ध पनि अर्को रूप हो। यदि तपाइँ तपाइँको देशको नियमहरु अनुसार पर्याप्त पुरानो छैन भने, तपाइँ सामग्री हेर्न सक्नुहुन्न।
डिज्नी प्लस को लागी उत्तम VPN:
यी पक्षहरूलाई दिमागमा राख्दै, VPN ले तपाईंलाई यस्ता अवरोधहरू पार गर्न र तपाईंको सामग्री स्ट्रिम गर्न सक्षम गर्दछ। एक भीपीएन अन्य देशहरूमा उपलब्ध सर्भरहरूमा जडान हुनेछ ताकि तपाईं कुनै पनि समस्या बिना आफ्नो मनपर्ने सामग्री हेर्न र स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ, यहाँ डिज्नी प्लस र अन्यको लागि सात सबैभन्दा उत्तम रूपमा पोषित VPN को सूची छ स्ट्रिमि apps अनुप्रयोगहरू :
सूचीबाट सुरू गरेर, हामीसँग Nord VPN छ जुन लोकप्रियतामा स्थिर रूपमा बढ्दै छ। यसले तपाईलाई speed० भन्दा बढी देशहरू र 5,000,००० सर्भरमा उपलब्धताका साथ उच्च-गति जडान ल्याउँछ। तपाईं यसलाई कुनै पनि उपकरणमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ! यदि तपाइँ नर्डको प्रीमियम सदस्यता छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ छवटा अलग उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण, यो पैसाको लागि उच्च मूल्य हो।
अल्ट्रा-द्रुत गतिको साथ, तपाईं धेरै सुविधाहरू पाउनुहुनेछ, VPN सुरक्षा जस्तै ईन्क्रिप्शन र ईन्क्रिप्शनहरू, र अधिक। यो एकल व्यक्तिको लागि थोरै महँगो हुन सक्छ, तर यदि तपाईले छ व्यक्तिलाई चिप इन गर्नुभयो भने तपाईसँग अत्यधिक किफायती वीपीएन हुन्छ। निस्सन्देह डिज्नी प्लसका लागि विश्व-स्तरीय VPN हो।
NordVPN कालो फ्राइडे -% (% अफ (आश्चर्यजनक सौदा)
यदि Nord तपाइँको देशमा उपलब्ध छैन भने, तपाइँ एक्सप्रेस VPN छनौट गर्न सक्नुहुन्छ यसको आश्चर्यजनक उपलब्धताको लागि १ over० भन्दा बढी देशहरूमा। योसँग ,000००० भन्दा बढी सर्भरहरू छन्, जुन नर्डको आधा भाग हो, तर प्रत्येक एक उच्च प्रदर्शन गर्दैछ। यदि तपाईं कुनै पनि उपकरणमा डिज्नी स्ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं एक्सप्रेस सदस्यता र VPN को लागी devices उपकरणहरू सम्म मजा लिन सक्नुहुन्छ।
VPN को बारे मा राम्रो पक्ष यो हो कि यो कुनै पनि उपकरण र प्लेटफर्ममा इष्टतम काम गर्दछ, कन्सोल सहित। यो ब्राउजर को लागी एक विस्तार छ र के छैन। यदि तपाईं साँच्चिकै डिस्ने प्लस सामग्रीमा पहुँच प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने यो एक उत्तम VPN हो। यससँग धेरै उन्नत सुविधाहरू छन्, जस्तै किल स्विच र स्प्लिट टनेलि।। एरगो, तपाइँ तपाइँको इन्टर्नेट सुरक्षा सुदृढीकरण। असीमित मनोरंजन बाहेक, तपाईं बलियो सुरक्षा पाउनुहुनेछ! यो अत्यधिक प्रयोगकर्ता मैत्री छ र सैन्य ग्रेड सुरक्षा गर्व गर्दछ।
ExpressVPN कालो फ्राइडे - आश्चर्यजनक सौदा
यहाँ एक व्यावहारिक मानक VPN छ जुन 60० भन्दा धेरै देशहरुमा उपलब्ध छ र निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। तपाईं लगभग १7०० वा बढी सर्भरहरू पाउनुहुन्छ। धेरै अन्य VPN हरू जस्तै, तपाईंसँग विश्वव्यापी अनुकूलता छ। यद्यपि सर्फशार्कलाई के फरक पार्दछ भन्ने कुरा यो हो कि तपाईं यसलाई एकल सदस्यताका साथ धेरै उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो एक सैन्य-श्रेणी VPN हो कि तपाइँलाई एक सेतो सूचीको साथ अनुकूलनको लागि उच्च क्षमता ल्याउँछ। सरल शब्दहरूमा, तपाईले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कुन अनुप्रयोगहरूले VPN प्रयोग गर्न सक्दछन्। तपाईं SurfShark को साथ धेरै प्रस्तावहरूको मजा लिन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले अन्य VPN हरूमा फेला पार्नुहुन्न। जहाँसम्म, तपाईले अन्य अनुप्रयोगहरूको क्षमतालाई सुव्यवस्थित गर्नमा केही सीमाहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यो डिस्ने प्लस को लागी राम्रो काम गर्दछ।
अर्को पर्याप्त मानक VPN जुन तपाईं कुनै उपकरणमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं सर्भरहरूको एक सभ्य संख्यामा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस् (१,500००+) सबै सहि देशहरूमा उपलब्धताका साथ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईं आफूले चाहे जति उपकरणहरूमा एकल सदस्यता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यसलाई एन्क्रिप्शन भण्डारण ब्याकअपमा थप्नुहोस्, र तपाईंसँग अत्यधिक मोहक सम्झौता छ। यदि तपाईं ब्याटमा सिधै सदस्यता लिन चाहनुहुन्न भने, तपाईं days० दिनको ट्रायल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जसले यसलाई प्रयोग गर्नको लागि उत्कृष्ट VPN बनाउँदछ यदि तपाईं VPN प्रयोग गरेर सही विकल्प हो कि भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने, परीक्षणले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ राम्रो निर्णय। सरल शब्दहरूमा, यदि तपाइँ एक VPN प्रदायक चाहानुहुन्छ कि उचित रूपमा राम्रोसँग काम गर्दछ र मानक प्रदर्शन छ भने, यो तपाइँको डिज्नी प्लसको लागि हो।
यहाँ सूचीमा अर्को राम्रोसँग परिचित थप पनि छ। साइबर गोस्टसँग नर्ड वा एक्सप्रेसभिएपएन भन्दा बढि सर्भरहरू छन्, सूचीमा ,,०० भन्दा बढीको साथ। यो लगभग 90 ० देशहरुमा पनि उपलब्ध छ, र एकल सदस्यता सात उपकरणहरु को लागी व्यवहार्य छ।
यो सार्वजनिक Wi-Fi को लागी यसको अटल समर्थन को कारण बाहिर खडा छ। तसर्थ, यदि तपाईं धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ वा टाढाको स्थानबाट तपाईंको डिस्ने प्लस सामग्री पहुँच गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो। यो तपाईंको Wi-Fi को लागि अत्यधिक सुरक्षित छ। जबकि यो अन्य VPNs को रूप मा व्यापक संगतता छैन, यो सबै प्रचलित चयन समर्थन गर्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्पनीले बारम्बार बिभिन्न प्रस्तावहरू र छुटहरू जारी गर्‍यो जुन तपाईं आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
R. बलियो VPN
यदि तपाईं यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ कि यो एक करीव countries० देशहरूमा उपलब्ध छ र सर्भरहरूको कम स्तर हो,9around० तिर, स्ट्रभ VPN ले टेबुलमा धेरै प्रस्ताव गर्दछ। एकल सदस्यताका लागि, तपाई यसलाई १२ उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले तपाईलाई मूल्य विभाजन गर्न सजिलो छ।
सब भन्दा उल्लेखनीय पक्ष क्लाउड अनुकूलता हो कि तपाईं एक विस्तृत २ GB० GB भण्डारण ल्याउँछ। तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न वा कुनै समस्या बिना विश्वभरि तपाईंको सामग्री भण्डार गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को केन्द्रीय बिक्री पोइन्ट WireGuard साझेदारी हो।
एक मजबूत VPN सदस्यता संग, तपाईं WireGuard प्रस्ताव गर्दछ कि अनुप्रयोगहरू र उपयोगिताहरूको अधिकता पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। यसले धेरै बूस्टरहरू, एन्टि भाइरस, एन्टि-मालवेयर, प्रदर्शन बढाउने, र भण्डारण समावेश गर्दछ। VPN अपेक्षाकृत नयाँ हो र हाल विस्तारमा छ। यसले के प्रस्ताव गर्दछ, सँग यसको उत्कृष्ट बार्गेन छ।
सायद तपाइँ देशहरूको अभाव चाहनुहुन्न र सर्भरहरूको अधिकतम मात्रा चाहिन्छ? त्यसो भए तपाईसँग निजी इन्टर्नेट पहुँच छ। यो VPN यस्तो उच्च प्रदर्शन उपयोगिता हो कि तपाईं संग सर्वर को संख्या अधिक छ। १२००० भन्दा बढी सर्भरको मतलब तपाईसँग स्ट्रीमिंग गर्न र तपाइँको मनपर्ने डिज्नी प्लस सामग्री फेला पार्न कहिले पनि समस्या हुने छैन।
त्यो सबै होइन! तपाइँ यसलाई एकल सदस्यतामा १० उपकरणहरूसँग जडान गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोगकर्ता अनुकूल ईन्टरफेसको साथ प्रयोग गर्न यो अपेक्षाकृत सजिलो छ। त्यहाँ धेरै सुविधाहरू छैनन्, तर यदि तपाईं VPN चाहानुहुन्छ जसले डिस्नी + स्ट्रीमि .को लागि काम गर्छ भने, यो एक हो।
सदस्यता लागत धेरै प्रतिस्पर्धी हो, र तपाईं बहु VPN गेटवे पाउनुहुन्छ। यसैले, तपाइँको रेकर्डहरू पूर्ण रूपमा अज्ञात छन्, र त्यहाँ कुनै पनि लगहरू छैनन्। यद्यपि यसले सुरक्षा र अन्य सेवाहरू प्रदान गर्दैन धेरै VPNs जोडी गर्दछ। जे होस्, यो एक उत्तम विकल्प हो।
१ क्यू एक VPN मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक के हो?
बर्ष:एक VPN प्रयोग गर्न सजिलो र डिज्नी प्लस को साथ प्रयोग गर्न योजना बनाएको उपकरणसँग उपयुक्त हुनुपर्छ। यदि यसले अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गर्दछ जस्तै एन्टि-मालवेयर, ईन्क्रिप्शन, वा भण्डारण, त्यो ठूलो प्लस हो। जहाँसम्म, एक सर्भर को उपलब्धता सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक र देश हो।
२Q डिज्नी प्लस को लागि कनेक्ट गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो सर्भर के हो?
बर्ष:संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कुनै पनि सर्भर तपाईको डिस्ने प्लस VPN का लागी उत्तम सर्वर हो। यसले तपाईं लाई कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना सामग्रीको पूर्ण दायरामा पहुँच पुर्‍याउँछ। यसैले, तपाईं आफ्नो डिज्नीको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ + हृदयको सामग्रीमा।
3Q। मैले डिज्नीको लागि किन प्रीमियम VPN पाउनु पर्छ?
बर्ष:धेरै नि: शुल्क VPN हरू विज्ञापन बन्द गर्दछ वा तेस्रो पार्टी डेटा विज्ञापनका लागि अन्य विक्रेताहरूलाई बेवास्ता गर्दछ। केहि एक विशिष्ट बैंडविड्थ सीमा हुन सक्छ र तपाइँको जडान ढिलो हुनेछ। सरल शब्दहरूमा, ती तपाईंलाई पाउनको लागि पर्याप्त हुन सक्छ, तर डिज्नी प्लस स्ट्रिमि forको लागि तपाईं चाहानु भएको कुरा हैन।
सम्भावित जोखिम बाहेक, तपाईं आफ्नो विवरण सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, प्रीमियम VPNs तपाईंको प्रयोगको लगहरू राख्दैन। तपाईं इन्टरनेट पहुँच गर्दा पूर्ण अज्ञात राख्नुहुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंको गति अक्षुण्ण छ, र तपाईंले इन्टरनेटको लागि अतिरिक्त सुरक्षा पाउनुहुनेछ।
4Q। के स्ट्रिमिंग डिस्नी + को लागि VPN प्रयोग गर्न कानूनी छ?
बर्ष:हो, त्यहाँ कुनै नियमन छ कि VPN को उपयोग प्रतिबन्धित छैन। तपाईं सामग्री पहुँच गर्न कानुनी रूपमा VPN प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो समान जस्तै अन्य महादेशहरुमा यात्रा र तपाइँको मनपर्ने अनुप्रयोगहरू पहुँच गर्ने र के छैन। धेरै ब्राउजरहरू VPN को साथ आउँछन्, र टेक जियान्टहरू सहित लगभग सबै कम्पनीले उनीहरूको VPN सेवाहरू रोल आउट गर्नमा काम गरेका छन्।
यी प्रत्येक एक उल्लेखनीय प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। धेरै VPN हरू तपाईंको गति अस्वीकार गर्दछ जब तपाईं अन्य सर्भरहरूमा जडान गर्नुहुन्छ। जे होस्, यी VPN हरू डाउनलोड र अपलोडको लागि अक्षुण्ण राख्नेछन्। यसैले, तपाईं सक्नुहुन्छ HD स्ट्रिमि enjoyको आनन्द लिनुहोस् र तपाइँको डिस्ने प्लस को लागी धेरै।
क्षेत्र वा पूँजीवाद को अवरोधले तपाईंलाई उपयुक्त सामग्रीको मजा लिन रोक्न नदिनुहोस्। सबै पछि, तपाईं पूर्ण सदस्यता को लागी भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईंसँग यसलाई पहुँच गर्ने अधिकार छ। अब जहाँसुकै स्ट्रिमिंगको आनन्द लिनुहोस्, कुनै पनि समय, विशेष गरी यदि तपाईं यात्रा गर्नुहुन्छ भने डिज्नी प्लसका लागि यी उत्तम VPNs को साथ।
फायरस्टिकका लागि सर्वश्रेष्ठ VPN
VPN कालो फ्राइडे - G ०% छूट लिनुहोस्
नि: शुल्क हलिउड चलचित्रहरू अनलाइन पूर्ण चलचित्रहरू हेर्नुहोस्
खेल अनलाइन स्ट्रिमिंग नि: शुल्क प्रत्यक्ष
विन्डोज १० को लागी गूगल कास्ट डाउनलोड गर्नुहोस्
नि: शुल्क चलचित्र र टिभी अनलाइन
चलचित्र फ्रि-असीमित हेर्नुहोस्
नेटफ्लिक्स नि: शुल्क प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड